डिजाइनले यातायात २%% बढ्यो
पुनः डिजाइन पछि देखि २%% माथि भ्रमण गर्दछ
बिहीबार, फेब्रुअरी 10, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
हामीसँग अझै छैन Martech Zone ठिक तरीकाले हामी यो चाहान्छौं, तर नयाँ डिजाइन ठूलो सफलता भएको छ। साइटमा ट्राफिक छ २ 25% भन्दा बढि संग पृष्ठ दृश्यहरू %०% भन्दा बढि। यसले अतिरिक्त ट्राफिक समावेश गर्दैन जुन हामीले हाम्रो नयाँ साप्ताहिक न्यूजलेटरबाट अनुभव गरिरहेका छौं (माथि सदस्यता लिनुहोस्)।
डिजाईन लगातार साधनको रूपमा अन्डररेट गरिएको छ यातायात बढाउनुहोस् तपाईंको साइटमा। व्यक्ति जो एक महान डिजाइन मा पैसा खर्च छैन प्रायः मँ एक पेशेवर डिजाइन मा लगानी को बारे मा बहस। यो केवल मामला छैन।
एक महान डिजाइन तपाइँको कम्पनी मा एक ठूलो लगानी हो। हाम्रो साथी, कार्ला डसन (Dog कुकुर डिजाइन), ब्लगको यो पुनरावृत्ति डिजाइन। मैले बिल्कुल सफा केहि चीजको लागि मागे जुनमा एक लोगो समावेश छ। हामीले सुरूवात गरेदेखि नै केही जोडी समायोजनहरू गर्यौं, तर स्वच्छ, स्पष्ट लेआउट हामी पछि भएको जस्तै हो।
हामी पनि समावेशी WordPress को पोस्ट थम्बनेल हाम्रो ब्लगिंग टेम्प्लेट मा र एक जोडियो प्लगइन स्वत: पोस्ट थम्बनेल उत्पन्न गर्न ब्लग पोष्टमा पहिलो छविबाट। यस तरीकाबाट मैले सबै ब्लगरहरूलाई सुविधा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तालिम दिन जरूरी थिएन।
साथै, विषयवस्तुले ब्लग पोष्टको कोटी वा मुख्य कोटी पृष्ठहरूको कोटीमा आधारित गतिशील विज्ञापनहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाईंले अझै जाँच गर्नु भएको छैन भने, तपाईं हाम्रो मुख्य श्रेणी को मुख्य नेभिगेसनमा देख्न सक्नुहुनेछ: विश्लेषण, ब्लगिंग, इमेल मार्केटिङ, मोबाइल मार्केटिङ, खोज इञ्जिन मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया मार्केटिङ र प्रविधि.
पहिले कहिल्यै औपचारिक प्रायोजक नभएपछि, हामीले पहिले नै २ प्रायोजकहरू बन्द गरिसकेका छौं! ईमेलियम हाम्रो ईमेल मार्केटिंग पोष्टहरू प्रायोजित गर्दैछ र GetApp हाम्रो टेक्नोलोजी पोष्टहरू प्रायोजित गर्दैछ! एक विशेष धन्यवाद बाहिर जान्छ आईसकेट शानदार विज्ञापन प्रबन्धन प्रणालीको लागि।
नयाँ डिजाइनमा लगानीलाई हल्का नगर्नुहोस्। म तपाईंलाई बताउन मन पराउँछु कि यो सबै सामग्रीको बारेमा हो - तर तथ्य यो हो कि सामग्री फ्रेम र प्रदर्शन गरिएको तरिका जति महत्त्वपूर्ण छ।
SEO तपाईंको साइटको साथ रोक्दैन
एक महान सफलता कहानी! मलाई तरीकाले नयाँ डिजाइन मनपर्छ।
धन्यवाद ब्रान्डन! अझै बाटोमा!
म अझै नयाँ लुकमा बानी भैरहेको छु, किनकि म जहाँ थकथकीरहेको थिएँ। तर देखि, visitors 75% आगन्तुकहरू सामान्यतया नयाँ हुन्, यो अधिक महत्त्वपूर्ण छ कि नयाँ आगन्तुकहरूले साइटलाई मन पराउछन्, र तपाइँको संख्याहरूमा आधारित तिनीहरू स्पष्ट रूपमा गर्छन्!
हामी हाल हाम्रो साइट को एक नया डिजाइन मा काम गर्दै छौं: http://www.roundpeg.biz र हामी तपाइँबाट के सिक्न सक्छौं भनेर हेर्नको लागि तपाईंको परिवर्तनहरूमा अझ विस्तृत हेराई लिनेछ।